Mpanamboatra VEST - China VEST mpamatsy & orinasa
Orinasa vita amin'ny lamba fehikibo vita amin'ny lehilahy ambony
Ny akanjon'akanjon'akanjo lehilahy avo lenta dia tsotra, milamina ary ny V-vozony dia manome anao rivotra. Izy io dia mety amin'ny akanjo fararano, akanjo ivelany ary akanjo anatiny. Afaka mitana anjara toerana mitazona ny hafanana. Raha mividy be dia be ianao dia afaka mifandray aminay mivantana mba hahazoana ny vidiny tsara indrindra.
Fivarotana mafana, mens menaka fanodinana volo dia azo namboarina ho an'ny hafanana sy ny fiononana
Ity fehin-tsoavaly mens ity dia fitafiana tsotra, ho tianao ny akanjo amin'ny lambam-bolan'ny fararano. Ity fanapahana tsy tapaka miaraka amin'ny lamba malemy ity dia manome fampiononana maharitra, mitazona anao ho tsara mandritra ireo andro fararano mangatsiaka ireo ary ny vozon'akanjoko dia miaro anao
100% polyamide waterproof malefaka ho an'ny lehilahy
Ny akorandriaka malefaka ataontsika dia mety amin'ny toetry ny andro rehetra. Ski fomba fivarotana, zavatra mafana amin'ny sambo sy tanàna manerana an'izao tontolo izao. Ny fisehoana an-tsehatra, ny hafanana ary ny fiarovana izay rehetra manana palitao akorandriaka dia afaka mahita ny fahaizan'ny lamba akorandriaka malefaka. Tsy mampisy olana amin'ny hazavana sy ny rivotra malefaka. Na eo amin'ny lampihazo, eo amin'ny làlambe na amin'ny toeranao ankafizinao, dia ity no palitao ity.